Morondava : Trois dahalo tués et quatre blessés par le tir des gendarmes - ewa.mg
Morondava : Trois dahalo tués et quatre blessés par le tir des gendarmes
News - Morondava : Trois dahalo tués et quatre blessés par le tir des gendarmes
Trois dahalo ont été abattus, et quatre autre blessés lors d’un accrochage avec les forces de l’ordre à Morondava. Un vol de 42 bovidés a été survenu mardi vers 5 heures de matin à Maroadabo, commune rurale d’Analaiva, district de Morondava. Cet acte a été commis par une vingtaine des malfaiteurs non identifiés, armés des fusils de chasse et des armes blanches. Après l’attaque suivie de vol par les bandits de grands chemins, ils se sont enfuis avec les bœufs volés et se dirigent vers le sud de la circonscription de la commune. Alertés à temps, huit éléments d’intervention du groupement de Menabe avec cinq militaires en détachement d’Analaiva et des membres de kalony se sont dépêchés au kizo Belafika, dans le fokontany Begodo commune rurale de Befasy pour engager l’interception de ces dahalo. Ce mardi après-midi, vers 14 heures, un accrochage de ses éléments de la force de l’ordre avec les malfaiteurs a eu lieu. Trois dahalo ont été neutralisés et quatre blessés par balles. Les forces de l’ordre et le kalony sont tous sains et saufs. Un fusil de chasse de calibre 16 a été retrouvé et les 41 bœufs volés ont été récupérés dont un mutilé. Selon la gendarmerie la recherche du renseignement concernant les malfaiteurs continus en ce moment et une enquête a été ouverte.
L’article Morondava : Trois dahalo tués et quatre blessés par le tir des gendarmes est apparu en premier sur Midi Madagasikara.
L’article Morondava : Trois dahalo tués et quatre blessés par le tir des gendarmes a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fampiroboroboana ny kolontsaina siantifika: 57 000 ny mpianatra misitraka ny fandaharanasa Educmad
Ho fampiroboroana ny fitiavan’ny mpianatra ny taranja siantifika no nametrahan’ny Accesmad ny fandaharanasa Educmad eto amintsika. Mampiasa ny teknolojia vaovao miaraka amin’ny fitaovana mifanaraka amin’izany ny fampianarana ireo taranja fototra siantifika: matematika, fizika sy simia ary ny science de la vie et de la terre. Sekoly 102 amin’ny faritra 14 eto Madagasikara ny mampihatra ny Educmad hatramin’izao. Mpianatra 57 000 ny misitraka ny fampianarana ny taranja siantifika miaraka amin’ny mpampianatra 2 689 voaofana, araka ny fanazavan’ny talen’ny Accesmad, Ralaiharivonison Olivier, teny Analakely, omaly. Nitombo 2 000 ny mpianatra vaovao afaka nikirakira ny Educmad noho ny fametrahana fotodrafitrasa sy fitaovana vaovao na eo aza ny valanarerina Coronavirus. Mampiavaka ity fomba fampianarana ity, ankoatra ny fikirakirana ny ordinatera, ny fivelaran’ny fikarohana siantifika andraisan’ny mpianatra anjara, eo koa ny torolalana hisokafana amin’ny tontolon’ny asa.Fampiasana ny herin’ny masoandro Vinanasa lehibe ho an’ny taom-piasana manaraka ny hampivelatra ny fampiasana ny herin’ny masoandro amin’ny asa rehetra atao ka vita eto an-toerana ny fitaovana afaka manome izany. “Hanana tombony betsaka ny sekoly tsy mbola manana herinaratra nefa maniry ny hampihara ny fandaharanasa”, hoy ny fanamarihany ihany. Ilaina koa ny fahaizan’ny mpikojakoja ny fitaovana ao aminy ka tsy ilana teknisianina, indrindra ho an’ireo sekoly any ambanivohitra lavitra. Hijery ny fomba ahafahana manatanteraka izany ny tomponandraikitry ny fikambanana Accesmad hampihenana ny vola mivoaka. Nivory nanao tomban’ezaka sy namaritra ny vina ho an’ny taom-pianarana vaovao ny talen’ireo sekoly miankina sy ny tsy miankina amin’ny fanjakana mampihatra ny Educmad eto amintsika, teny Analakely.Vonjy A.L’article Fampiroboroboana ny kolontsaina siantifika: 57 000 ny mpianatra misitraka ny fandaharanasa Educmad a été récupéré chez Newsmada.
Mafonja sy mampieritreritra ny hafatra nentin’ny Ray Masina Fransoa nandritra ny fihaonany tamin’ireo mpitondra fanjakana sy ny fiarahamonim-pirenena ary ny diplomaty nandritra ny “ceremony building” teny Iavoloha, ny sabotsy 7 septambra 2019. Nampatsiahy izy fa fitaovana fototra hampiroboroboana ny maha olom-pirenena sy ny tetikasa ho an’ny maha olona ny politika. Mazava ho azy hoy ity filoham-panjakana ao “Vatican” ity fa ny asa sy ny andraikitra ara-politika dia lokan’ady maharitra ho an’ireo manana iraka, hiasa sy hiaro ny mpiray tanindrazana aminy, singanina manokana ireo marefo, hanamora ny fepetra entina mankany amin’ny fampandrosoana mendrika sy mahitsy izay mampandray anjara ireo mpisehatra rehetra eo anivon’ny fiarahamonim-pirenena. Nambarany ihany koa fa ilaina ny fanekena fa miantoka ny fampandrosoana ny fanampiana avy any ivelany ary mampisokatra an’i Madagasikara amin’ny firenena manodidina azy. Mety hitarika any amin’ny fironana any amin’ny “kolontsaina iraisana” izay hanimba ny harem-bakoka ny firenena tsirairay anefa izany fisokafana izany, hoy izy. Ankoatra izany, “raha manaja ny fomba fiainan’ny razambe, sy mihevitra ny zavatra ilain’ny olom-pirenena isika dia tsy ny fanampian’ny fianakaviambe iraisam-pirenena ihany no hampandroso ny firenena; ny vahoaka ihany no handray an-tanana ny momba azy, lasa izy ihany no mamolavola ny vintany. Mamporisika antsika hiady mafy amin’ny endrika kolikoly rehetra, mampitombo ny fahasamihafana ara-piarahamonina, mampitombo fahantrana lalina i Papa Fransoa. “Tsy afaka miresaka fampandrosoana tena izy isika raha tsy mikaroka ny fomba hiarovana ny zava-boahary fa eo ihany koa ny fitadiavana vahaolana mahomby izay mihevitra ny fifampiankianan’ny zava-boahary sy ny rafi-piarahamonina satria tsy misy afa-tsy roa ny krizy: tontolo iainana sy ny sosialy”. Resy lahatra ny lehiben’ny eglizy katolika fa manan-karena zava-maniry sy biby i Madagasikara. Tandidomin-doza vokatry ny fandripahana ala ho an’ny tombontsoa an’olombitsy, fanondranana antsokosoko anefa izany. Noho izany, zava-dehibe ny famoronan’asa sy sahan’asa mampidi-bola ho an’ireo mivelona amin’ny zava-boahary mba hiarovana ireo sisa tavela, araka ny soso-kevitrany. Nohamafisiny fa zava-dehibe ny fihainoana ny fiarahamonim-pirenena, ny fanohanana ny asan’izy ireo mba hisian’ny rindran-damina eto amin’ny firenena. Vonona hatrany hifanankalo hevitra amin’ireo Kristianina avy amin’ireo antokom-pivavahana isan-karazany sy ny mpiantsehatra rehetra eo anivon’ny fiarahamonim-pirenena ny eglizy katolika. Amin’ny alalan’ny firahalahiana tena izy, izay manome lanja ny fihavanana no hanatanterahana izany mba hanamorana ny fampandrosoana ny maha olona mba tsy hisy olona na dia iray aza voahilikilika. Lynda A. Cet article PAPA FRANSOA TETO MADAGASIKARA: Mifanohitra amin’ny fihavanana ny fanavakavahana est apparu en premier sur déliremadagascar.
Kitra any ivelany: Barea roa lahy hifaninana amin’ny D1
Miampy hatrany ireo mpilalaon’ny Barea de Madagascar, miatrika ny fifaninanana D1 any amin’ny firenena ilalaovany avy. Anisan’ireny Raveloson Rayan, milalao ao amin’ny Estac Troyes, Frantsa. Ny fandresena tamin’ny isa mazava 2 no ho 0 nanoloana ny Dunkerque, ny asabotsy lasa teo, no nandrombahany ny tompondakan’ny “Ligue 2” ka nahazoany ny tapakila hiakarana amin’ny “Ligue 1”. Enin-taona aty aoriana vao tafaverina amin’izany indray ny Estac Troyes.Ankoatra an’i Rayan, tafakatra ao amin’ny D1 ihany koa i Loic Lapoussin, milalao ao amin’ny Royale Union St-Gilloise, nandrombaka ny tompondakan’i Belzika, D1B. Tsiahivina fa efa mifaninana ao anatin’ny “Ligue 1” Frantsa i Jeremy Morel sy i Thomas Fontaine, milalao ao amin’ny FC Lorient.Ankoatra izay, nandrombaka ny tompondakan’i Bolgaria fanimpitony indray Andrianantenaina Abel Anicet, kapitenin’ny Barea de Madagascar, raha fanimpolony ho an’ny Razgrad Ludogorets, ekipa ilalaovany.Marihina fa anisan’ireo ekipa hiady ny toerana hiatrehana ny “Ligue des champions” ho an’ny taom-pilalaovana 2021-2022 indray izany i Abel Anicet. TompondakaL’article Kitra any ivelany: Barea roa lahy hifaninana amin’ny D1 a été récupéré chez Newsmada.
Nanao fanambarana, nitondra fanamarihana ary mandiso izay lazain’izy ireo fa “vaovao tsy marina” niely tao anaty tambajotran-tserasera, mikasika ny fahafatesan’ilay tovolahikely antsoina hoe Nasandratra Valimbavaka, teny Ivato, ny eo anivon’ny Etamazaoron’ny Tafika.Manoloana ny vaovao miparitaka ao anatin’ny tambajotran-tserasera mahakasika ny raharaha Nasandratra Valimbaka, nitondra fanamarihana ny Etamajaoron’ny Tafika malagasy. Nilaza izy ireo fa tsy ny miaramila no namono an’io olona io. « Nanavotra izahay fa tsy namono », hoy ny fanazavana voaray. Nambarany fa tamin’ny alahadin’ny 06 jona tokony ho tamin’ny 05 ora sy sasany hariva, tratran’ny vahoaka izay nilalao baolina tao amin’ny kianjan’ny Bani ny mpangalatra bisikleta roa lahy, izay efa voadaroka. Nandray ny andraikiny ny miaramila, hoy ihany ny voalaza tao anatin’ilay fanambarana ka nanapa-kevitra ny hitondra azy roa lahy tany amin’ny « poste avancé » ny zandary. Tafatsoaka anefa ireo ankizilahy ireo noho izy tsy nisy nitazona, tsy nanenjika ihany koa ny miaramila. Tokony ho tamin’ny 07 ora sy sasany hariva anefa, nisy nampandre ireo miaramila fa misy olona lavo eo akaikin’ny EPP BASE, tsy misy kara-panondro ihany koa. Nijery izany ny miaramila ka olona tsy nahatsiaro teno no hita teo. Voamarina tamin’izany fa iray tamin’ireo ankizilahy niharan’ny fitsaram-bahoaka izany ka nentina teny amin’ny sampana vonjitaitra ny HJRA avy hatrany. « Ny dokotera nandray anay tao moa niteny fa tsy misy hevitra intsony ity olona ity. », hoy ny fanazavana. Ny ampitson’io, nampandrenesina ny tranga ny zandary saika nanaterina azy roa lahy. Nasaina nanatona ny HJRA ihany koa izay mitady olona tratran’ny fokonolona nangalatra. Tsy izany anefa no nanontanian’ireo fianakaviana nony tonga tany amin’ny zandary, fa hoe : “hitady olona very izahay”. Nilaza ihany koa ireo fianakaviana fa voarirarira.Fanampiana no nataon’ny miaramila…Disoin’ny miaramila tanteraka izany filazana izany. Nanazava ny Etamazaoron’ny Tafika fa niverina tany amin’ireo miaramila ireo fianakaviana ary natoro azy ireo ny dokotera nandray an’ilay ankizilahy 15 taona. Voamarina tamin’izay fa Rambolamendrika Nasandratra Valimbavaka tokoa ilay maty. Nivoaka ra ny sofiny, natao ihany koa ny « autopsie » an’io tovolahy mpianatra ao amin’ny sekoly Fanovozantsoa FJKM Ivato Seranana, taona faha-9.Nanamafy ireo miaramila fa fanampiana ny mpiara-belona dia antom-pisian’ny miaramila. Nilaza izy ireo fa tafiditra ao anatin’ny asa hifarimbonana amin’ny vahoaka ny toe-javatra toy izao.Tsiahivina fa vao iray volana izay, nisy tovolahikely tratran’ireo miaramilan’ny Bani ambodiomy namaky trano teny an-toerana. Naterina teny amin’ny zandary izy tamin’izany ary nilaza fa misy olona maniraka sy manome vola azy ireo. Tsy fantatra, araka izany, raha namany ihany ireo ankizilahy niharan’ny fitsaram-bahoaka ireo. Handrasana ny tohin’ny fanadihadiana. Henintsoa HaniL’article Fahafatesan’i Nasandratra Valimbavaka – Ivato: “Olona efa tsy nahatsiaro tena no hita teo”, hoy ny Etamazaoron’ny Tafika a été récupéré chez Newsmada.